Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP
I-BCHT yasungulwa ngo-Matshi 2004 ngokutyalomali kwe-Changchun High-teknoloji yePropati yeNtengiso yophuhliso (iQela). Inkampani yoshishino oluphezulu olubandakanya uphando, uphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwezinto eziphilayo kunye neziyobisi. I-BCHT isineendawo ezine zokuvelisa ezihamba ngeekhilomitha ezili-235,000 zeemitha ezizonke kunye namaziko e-R & D amabini okugonywa kunye neziyobisi ezinezonyango ezona zixhotyiswe kakhulu kwiindawo ezingaphezu kwama-5000 square metres. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, utshalomali lwe-R & D yenkampani lidlula ngaphezu kwezigidi ezingama-120 zeRMB.
Ngo-2008, i-BCHT iqalise ngempumelelo imveliso yayo yeVicella Vaccine, Phila eChina. Kwiminyaka elandelayo, i-BCHT iqhubekile ngokuqhubekayo ekuphuculeni umveliso kwaye ikhokelela ngo-2010 ukususa i-gelatin kwi-adjuvant kwaye yandisa i-shelf ye-vaccine-ubomi ukuya kwiinyanga ezingama-36 ezona zide kunabo bonke kwihlabathi ngo-2011. Ezi mphuculo zomeleze ukhuseleko lokugonya kunye umgangatho, kwaye i-BCHT eyasungulwa yindawo ehamba phambili yokugonya kwe-varicella.
I-Jilin Maifeng Biopharmaceutical Co., Ltd., incediso ye-BCHT, inikezelwe kwi-R & D ngokubanzi kwindlela yobugcisa beetekisi eliphezulu kunye nesicelo sayo semveliso enkulu. I-Jilin Maifeng yinkampani yokuqala ukuphuhlisa nokusebenzisa i-microcarrier bioreactor iteknoloji ye-self-propelled to generate the rabies.
I-Varicella Vaccine , Izigulane zeRabies zokuSebenzisa abantu , Ubuninzi beVicella Vaccine , Ubuninzi beeRabies Vaccine , PFS Varicella Vaccine , I-Acetate ephumayo
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-arhente
Idilesi:1260Huoju Road,Changchun High-tech Zone,Changchun,Jilin,China, Changchun, Jilin
Ibhokisi lokubonisa laseBossgoo:http://ccbcht.xh.bossgoo.com
Related Products List: I-Varicella Vaccine , Izigulane zeRabies zokuSebenzisa abantu , Ubuninzi beVicella Vaccine , Ubuninzi beeRabies Vaccine , PFS Varicella Vaccine , I-Acetate ephumayo , Varicella Vaccine , I-Varicella Vaccine Live